Zovia Gold Syrup(Multivitamin) – Online Myanmar Pharmacy
Zovia Gold Syrup(Multivitamin)
Zovia Gold Syrup(Multivitamin) - is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
တက်ကြွလန်းဆန်းကျန်းမာစေဖို့ " Zovia Gold အားဆေး " ကို ဆောင်ထားကြပါစို့ ...
Zovia Gold တွင် လူတစ်ဦးချင်းစီတွင်လိုအပ်သော သက်စောင့်ဗီတာမင်၊သတ္တုဓာတ် ၃၁ မျိုး နှင့် Antioxid‌ants(ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ) ဟန်ချက်ညီစွာစနစ်တကျပေါင်းစပ်ပါ၀င်ပါသည်။
ကျန်းမာသန်စွမ်းသောခန္တာကိုယ်နှင့် ကိုယ်ခံအားမြှင့် တက်စေရန်အတွက် နေ့စဉ်ဖြည့်စွက်သောက်သုံးသင့် သောဆေးကောင်းတစ်လက်ဖြစ်ပါသည်။
ကလေးငယ်များအတွက် Zovia Gold Syrup အားဆေးအနေဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Indicated for the prevention and treatment of vitamins and minerals deficiencies, chronic diseases, infection illness, osteoporosis, surgery, poor digestion, old Age, pregnancy and lactation, poor appetite, chronic dieting etc.
Act asaprimary regulators of metabolic processes and playarole in energy transformations, usually acting as co-enzymes in enzymatic systems hence improve immune functions & normalize bodily functions.